माधव र देउवालाई जेल हाल्नु पर्दैन ? « Jana Aastha News Online
माधव र देउवालाई जेल हाल्नु पर्दैन ?
प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७८, बिहीबार ११:००
प्रहरीमा जाहेरी छैन, कुनै सूचना वा प्रमाण पनि छैन । तर, दुई–दुईपटक देश चलाएको प्रधानमन्त्रीले भनिदिनुभयो, ‘माधव नेपाल देशद्रोही हो !’ केपी ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा माधवमाथि यस्तो शब्द प्रहार गर्नुभएपछि प्रश्न उठेको छ, के अप्रमाणित आरोप लगाउनेलाई कानुन लाग्दैन ? अनि देशद्रोही नै हो भने त्यस्तो मान्छेलाई जेल हाल्नुपर्दैन ? नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिको आत्मसम्मान, सामाजिक तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यो स्थितिमा उहाँमाथि दुस्कृतिको मुद्दा चल्ने राय केही कानुन व्यवसायीले दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै अड्डा, अदालतमा त्यस्तो मुद्दा भने परेको छैन । यदि ओलीले भनेजस्तो माधव नेपालले राष्ट्रहितविपरितको काम (देशद्रोह) गर्नुभएको हो भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ आकर्षित हुन्छ । उक्त दफाले ५ वर्षसम्म कैद सजायसमेत निर्धारण गरेको छ । तर, त्यही कुरा प्रमाणित नभएमा आरोप लगाउने व्यक्ति सजायँको भागिदार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
माधव नेपालहरुले पार्टीमा ‘अराजकता र अधिनायकवाद’ विरुद्ध देखिने गरी अवज्ञा र अनुशासन तोड्ने काम गरेकै हो । एमाले विभाजन गरेको हैन । व्यक्तिविरुद्ध विद्रोह गर्नु कसरी देशद्रोह हुन्छ ? त्यसो हो भने त गिरिजाप्रसादविरुद्ध नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक जन्माउने शेरबहादुर देउवामाथि उहिल्यै देशद्रोहमा मुद्दा चल्नुपर्ने, बाबुराम, वैद्य र विप्लवलाई आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले जेल हाल्नुपर्ने !
तर, केपीले गर्नु के हुन्छ भने, गाली गरेर बोल्नेबित्तिकै आफ्ना दूत माधवकहाँ पठाइहाल्ने ! दिउँसो देशद्रोही भन्ने अनि साँझ सुवाष नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई पठाएर नाडी छाम्न लगाउने । यसबीच एकातिर पार्टी एकताको निम्ति गठित र विघटित कार्यदल एकताकै निम्ति छलफलमा छ, अर्कातिर एक पक्षले एकता गर्नै नपर्ने जसरी एकतर्फी गतिविधि अगाडि पनि बढाइरहेको छ ।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले ०७५ जेठ २ को कमिटी बनाउने भनेर अपानि जारी गरेको छ । पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि समय पनि तोकेको छ । त्यो बैठकमा माधव नेपाल जानुभएन । एकता पक्षधर मानिने कार्यदल सदस्यहरु पनि त्यहाँ थिएनन् ।
कुरा चल्यो, बैठकहरुमा मात्रै हैन, अन्तिममा माधव नेपालसँग भएका कोही पनि केपीतिर आउँदैनन् ! पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा भीम रावलहरु पनि एक्लाएक्लै नआउने ठहर ओलीका केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेका छन् । माधवका अनेकन शर्त र ओलीका अपशब्दहरुबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेहरु पनि दिक्क भइसक्नुभएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा कस्तो अचम्म देखियो भने, आफूहरु एमालेमा नरहेको र माओवादी नै हौँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका टोपबहादुर रायमाझीहरु पनि त्यहीं छन् । यसबीच गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो जिल्लाको चिन्ता राखेका छन् । ‘अध्यक्ष टोकबहादुर वाइवा छ । ऊ उता–उता हिँडिरहेको छ ।’ यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने उनको प्रश्नमा ओलीले भन्नुभयो, ‘इञ्चार्जको हैसियतले बैठक बोलाउनुस्, आएनन् भने अशोक व्याञ्जु छँदैछ नि !’
#सूचना वा प्रमाण